200 Ton Dockyard - Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Co.,Ltd.
/ 200 Ton Dockyard
This 200 ton dockyard has built Yangon Region of Hlaing River bank of Kyimyindine Township in 43.77 acres compound Dock Yard start mainly 200 ton dock yard and for systematically maintenance of fishing boats. There are dock yards built in neighbour countries.
Max Capacity - 200 MT
Establish year - 2008
Investment - 1907.37 million
တန် ၂၀၀ လွန်းကျင်းလုပ်ငန်း
တည်နေရာ လှိုင်မြစ်တစ်ဘက်ကမ်း၊ ကြည်းမြင့်တိုင်မြို့နယ်။
အကျယ်အဝန်း မြေဧက ၄၃.၇၇
တန် ၂၀၀ လွန်းကျင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ အဆင့် ( ၂ ) ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ ရေယာဉ်များနှင့် ပုဂလိက ရေယာဉ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လွန်းတင်ပြုပြင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။အဓိကလုပ်ငန်းအနေဖြင့် လှေများအားလွန်းတင်ပြင်ဆင်ခြင်း အပြင် သစ်အရောင်းဆိုင်နှင့် စက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် တို့ တည်ရှိပါသည်။
လွန်းတင်ပြင်ဆင်မည့်ရေယာဉ်များအား ကျွန်းကျင်သောလုပ်သားများ၊ခေတ်မှီသော စက်ကိရိယာများ အသုံးပြုရျ် လွန်းကျင်းပေါ်ရှိလွန်းတင်ခုံများပေါ်တွင် စနစ်တကျ နေရာချထားပေးခြင်း၊
လွန်းတင်ရေယာဉ်များအတွက် အဓိကလိုအပ်သော သစ်အမျိုးအစား၊ဆိုဒ်စုံများအား လွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိစေရန်အတွက် သစ်စက်/သစ်အရောင်းဆိုင်ထားရှိပေးခြင်း ၊
လွန်းတင်ရေယာဉ်များ၏ ပြင်ဆင်မှု့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား လွန်းကျင်းအတွင်းတစ်နေရာတည်းမှာပင်ပြုလုပ်ပြင်ဆင်နှိုင်ရန် စီမံထားရှိပေးခြင်း၊
လုပ်ငန်းချိန်အတွင်း ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေစွာ ဆောင်ရွက်နှိုင်ရေးအတွက် လျှပ်စစ်မီးအပြည့်အ၀ အသုံးပြုနှိုင်စေရန် စီမံထားရှိခြင်း၊
လွန်းကျင်းတွင် ရေယာဉ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း / လုပ်သားများအား အရန်သင့် စီစဉ်ထားရှိခြင်း၊
သံထည် / သစ်သား ငါးဖမ်း ရေယာဉ်များ လက်ခံတည်ဆောက်ပေးနှိုင်ခြင်း ၊ တည်ဆောက်မည့်သူများအတွက် လိုအပ်သောဖြည့်ဆည်းမှု့များ ပံပိုးဆောင်ရွက်ပေးနှိုင်ခြင်း၊
တန် ၂၀၀၀ အထက် Super Power Barge များ တည်ဆောက်ရန်မြေနေရာနှင့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရှိခြင်း၊ Construction Facilities များဖန်တီးပေးနှိုင်ခြင်း၊
သဘောၤကျင်း အတွင်းလာရောက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသူများအတွက် စားသောက်ရာတွင် အခက်အခဲမရှစေနှိုင်ရန် စားသောက်ဆိုင်ခန်းများဖွင်လှစ်ထားရှိပေးခြင်း၊
လွန်းတင်ရေယာဉ်များအတွက် လွန်းတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရပ်များတွင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရရှိစေနှိုင်ရန်အရောင်းဆိုင်များဖွင့်လှစ်ထားရှိပေးခြင်း၊
လွန်းတင် ပြင်ဆင်မည့် ရေယာဉ်များ အတွက် အချိန်တို အတွင်းပြုပြင်ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး လွန်းတက် / လွန်းဆင်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံး စီမံဆောင်ရွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊
လွန်းတင်ရေယာဉ်များ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရေ၊မီးများ အရန်သင့် စီစဉ်ထားရှိပေးခြင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန် စီမံထားရှိခြင်းနှင့် အခြားလိုအပ်သော ကိစ္စရပ်များအတွက် ပြည့်စုံစွာစီစဉ်ထားရှိပေးခြင်း၊